Umuntu wamanje kunzima ukucabanga ngaphandle kwe-Intanethi. Ngaphezu kwalokho, kuvela kwinethiwekhi esithola ulwazi lwamanje mayelana nemicimbi emhlabeni, amasiko amasiko. Ngama-movie wokubuka i-Inthanethi futhi ulalele umculo, ukudlala nokuxhumana. Futhi kwakuyiWebhu Yezwe Yonke eyabe yindawo lapho iningi lemithombo yemali yomhlaba okwamanje ihamba khona. Ngakho-ke, singakwazi ngisho nokuthola imali ngaphandle kokushiya ekhaya, ukutshala imali kulezo ziprojekthi kanye nezinkampani, esizifunda ngokubonga kwi-intanethi.
Emibuthanweni yokutshalwa kwemali, ukuxhumana phakathi kwabo, abantu bafisa omunye nomunye "inzuzo ecebile". Indlela yokuqonda leli gama, yiziphi izinhlayiya ze-semantic eziqukethe? Ake sibheke ezichazamazwi ezichazayo. Ushakov, Efremov, Ozhegov kanye neminye imithombo ichaza ukuthi yiziphi izinzuzo, kanje. Leli gama livela kwamanye amazwe (isiFulentshi, isiNgisi) futhi lihunyushwe ngokuthi "inzuzo, inzuzo, inzuzo." Izithasiselo kuye "ukulahleka, ukulahleka." Inkulumo yesimanje yombhalo isetshenziswa ngokungavamile, ngokuvamile kaningi nge-tinge engavamile. Ngokujwayelekile kwakusetshenziselwa ubuqili kanye nokubhala kwezindaba ekuchazeni izwe le-capitalism-capitalist. Umqondo ocacile wokuthi yiziphi izinzuzo, unikeza ukucaphuna okulandelayo, okushiwo njengesibonelo kusihlokwana sesichazamazwi u-Ushakov. Isebenzisana nabanhloko-zimali ababoshiwe kakhulu ezinkambeni zabo ukuthi abakwazi ukucabanga nganoma yini enye, abantu kanye nabantu.
Inzuzo nebhizinisi lesimanje
Ngaphandle kokungahambi kahle, leli gama linenye, i-huy semantic hue. Kubonakala uma kuziwa ekuthengisweni kwezezimali zanamuhla, izimali ezibonakalayo, izimali kanye nemali engenayo. Igama lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google". Bhalisela i-Google + Izibuyekezo ze-Google Play manje zisebenzisa i-Google + ngakho-ke kulula ukubona imicabango yabantu esuka kubantu obakhathalelayo. Izibuyekezo ezintsha zixhunyaniswa ngokusesidlangalaleni kuphrofayeli yakho ye-Google +. Igama lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google". , Ukunikeza izimali zabo ekuphathweni kwetrust kuma-pamm-akhawunti noma ekuhwebeni kwabahwebi ngabanye. Ibhizinisi le-intanethi lingenye yamathuluzi athandwa kakhulu futhi akhiqizayo okwamanje ukuthola ukuzimela kwezezimali. Ngakho incazelo yokugcina yalokho okuzuzwayo kunomqondo wanamuhla welizwi: amaholo kanye nezinzuzo ngokusebenzisa utshalomali, njll, ngokusebenzisa iWorld Wide Web.
Kwanele ukuthi uthayiphe umbuzo wosesho umbuzo: "Uzofaka kuphi imali?" - njenge- "Yandex", "i-Google" nezinye izinhlelo ngesikhathi esisodwa zizokhipha inombolo enkulu yamakhasi ngamashumi emakhulu yemiphumela. Futhi wonke umnikazi wesayithi uzodumisa amaphrojekthi awo, advertise kubo. Ngakho-ke, ukuze ungalokothi ulahlekelwe olwandle kolwazi, kubalulekile ukuba abatshalizimali bezinsizakalo bazi kahle igama eliyisisekelo, ukuze baqonde ukuthi yini elandela ukunikezwa okulingayo, nokukala izingozi ezingenzeka ngezinzuzo ezilindelekile. Futhi ukuqala, thola ukuthi inzuzo ku-Forex. Kulula nje, lokhu kuyinzuzo umtshali-zimali kanye nomhwebi abathola ngenxa yokuhweba imisebenzi, lapho ukuthengiswa okuvuleka ukudayiswa noma ukuthenga kuphephile ngokuvala. Lezi zenzo zenziwa emakethe yamazwe ngamazwe Forex. Imele imisebenzi ehlukahlukene ngemali, izimali, amasheya, igolide, imithombo yemvelo, njll. Zonke izenzo zenziwa nge-intanethi, ngokuzenzekelayo noma ngokuzenzekelayo, kuye ngokuthi izindlela zokusebenza zenkampani.
Futhi amagama ambalwa mayelana nendlela yokusebenza emakethe ye-Forex. Njengemali eyaziwa kakhulu yezezimali, ukusebenza (umdlalo) kwenziwa ngokuthenga / ukuthengisa (ukuthenga / ukuthengisa) currencies (ama-currency pair) namanye amanani. Lezi zimali zifakwa kuma-terminals akhethekile, lapho abadayisi bebenza khona. Ukufinyelela kubo kunikezwa izinkampani zokuhweba. Lapho uthuthukisa isu lokuhweba, umthengisi ngamunye uhlela ukuthi iyiphi inzuzo engayinika uma kwenzeka ukunqoba, nokuthi yikuphi ukulahlekelwa ngabathengi bakhe kuyokwenza uma imakethe ihamba "engalungile". Ngalokhu, kuqhubeka ukuqonda elinye igama: kuyini "ukuthatha inzuzo". Ake sithi umhwebi ulindele ukuthengisa / ukuthenga imali ngemali ethile, enhle. Ibeka imingcele ethile yohlelo (imingcele yentela). Lapho befika kule mikhiqizo ngokuzenzakalelayo. Lokhu kulandelwa yisikhungo sokuhweba. Bese bathatha inzuzo.
Ngakho-ke utshalomali olunenzuzo nemali ephezulu!
I-Liv Boeri - isibonelo, umethuli we-TV nomdlali we-poker professional
Izinhlobo zamabhonasi kubhuki
Kungani ukwenqaba visa US? Yini okudingeka uyenze kulesi simo?
Eilat: abahambi izibuyekezo mayelana lonke kwa-Israyeli
Amakhamera "Panasonic": Uhlolojikelele, tinkhulumo, imiyalelo, ukubuyekezwa
Izilwane zasekhaya. Indlela ukuhlukanisa a budgerigar, umfana esuka intombazane?
Wazi kanjani ukuthi wena uthanda indoda: amathiphu
Uyini imithetho yomgwaqo?